Ooop — Steemkr
ငါ့အမိ-In-ဥပဒကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပေမယ့်သူမအလုပ်ဖြစ်တယ်, သူ့ကတိကဝတ်နီးပါးအားလုံးသူမ၏အချိန်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ သူမသည်ရံဖန်ရံခါနေ့လည်စာစားရနျကြှနျုပျတို့၏သားကြာပါသည်။
သူတို့ကပီဇာကိုစားနှင့်သူမ၏ဖုန်းပေါ်မှာချို့ယွင်းမှုများ Bunny စောင့်နေကြလော့။ ငါ၏အကောင်လေးနှင့်သူ၏အဘွားငါမျက်နှာပြင်အချိန်နှင့်အမျှအလွန်ကြီးစွာသောအပြစ်အတိုင်းလိုက်နာသောဒိုးနတ်ယူဆပါသည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဒါသူတို့ပါပြီ - grandkids နှင့်အဘိုးအဘွား်၏အဖြစ် - တဟီဟီရယ်သူတို့သညျငါ့ကိုပေါ်တချက်ဆွဲထုတ်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့ရိပ်မိဘုံရန်ဘက်ပြုမည်။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းတွင်ကလေးအဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအသက်အရွယ်ရ။ Pooh ဆီးချိုရောဂါရှိပါတယ်; အဖွားမကောင်းတဲ့တင်ပါးရှိပါတယ်။ သူတို့ကနည်းနည်းနောကျမှာပွေးနိုငျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ 70 ခုနှစ်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့မကြာခဏသူတို့ကြေညာ "အဟောင်းကို။ " ငါ့အမေကသူ့အစောပိုင်း 70 ခုနှစ်ဟောင်းဖြစ်ရပြီမလား? ငါဒါမစဉ်းစားကြဘူး။
Congratulations @gold-bloger! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :